Wararka - Kaamirooyinka xannibaadda ee loo yaqaan 'NDAA' oo dhawrista
NDAA kamaradaha xakamaynta zoom
Aragtida Sheen waxay bixin kartaa kamaradaha xakamaynta zoom ee NDAA.
Arag Sheen Mstar zoom kaamirooyinka xannibaadda ayaa 100% waafaqsan NDAA.
Haddii aad maqashay wax ku saabsan liiska madow ee Mareykanka ee alaabooyinka sida Hikvision, Dahua iyo Huawei, markaa waxaad u maleyneysaa inaad u fiirsatay inaad eegto kamarad xagjir ah oo aan isticmaalin qalabka 'Huawei Hisilicon chip'. Arag Sheen way buuxin kartaa baahiyahaaga.
Waa maxay U hoggaansanaanta NDAA?
John S. McCain Oggolaanshaha Difaaca Qaranka (NDAA) waa sharci federaal Mareykan ah oo qeexaya miisaaniyadda, kharashyada iyo siyaasadaha Wasaaradda Difaaca Mareykanka. Sannad-maaliyadeedka 2019, Qeybta NDAA 889, waxay ka mamnuucaysaa dowladda Mareykanka inay ka soo iibsato qalabka fiidiyowga iyo isgaarsiinta shirkadaha Shiinaha qaarkood iyo kuwa hoos yimaada.
Ka taxaddar OEM-yada ama Qalabka calaamadeysan ee Re
Sababtoo ah kamarado badan iyo qalab kale oo dabagal ah ayaa si gaar ah loogu calaamadeeyay (OEM) way adkaan kartaa in la sheego haddii qalab gaar ah la mamnuucay, iyadoo lagu saleynayo magaca sumadda.
Labada shirkadood ee waaweyn ee ku jira liiska la mamnuucay waa Hikvision iyo Dahua. Si kastaba ha noqotee, mid kastaa wuxuu iibiyaa daraasiin OEM ah, kuwaas oo ku calaamadeeya alaabooyinka magacooda.
Haddii aad raadineysid qalabka amniga ee u hoggaansan NDAA, waxay u baahan kartaa xoogaa cilmi-baaris ah waxayna ku lug leedahay weydiinta waxyaabaha la mamnuucay sidoo kale. Tusaale ahaan, Huawei waa soo saare ka kooban qaybo ka mid ah liiska la mamnuucay waxayna siiyaan qalab jibbaaran shirkado badan oo kamaradaha soo saara.
Eeg kaamirooyinka u hoggaansamaya Sheen, ha u isticmaalin mid ka mid ah qaybaha ka imanaya alaab-qeybiyeyaashan. Faahfaahin la xiriir sales@viewsheen.com